Kubbadda oo la teesteeyo waxyeello ma u gaysataa caafimaadka maskaxda? - BBC News Somali
Kubbadda oo la teesteeyo waxyeello ma u gaysataa caafimaadka maskaxda?
Lahaanshaha sawirka STIRLING UNIVERSITY
Image caption Alan Shearer ayaa maray tijaabo uu kubbad teesteeyay kadib maskaxdiisa la baaray
Seeynisyahano baaraya xiriirka ka dhaxeeya xanuunada maskaxda sida hilmaamka badan oo kale iyo kubbadda cagta oo madaxa lagu teesteeyo ayaa sheegay in loo baahanyahay in cilmi baaris dheeraad ah lagu sameeyo arrinkan kadib markii la heley astaamo muujinaya in ay xiriir leeyihiin.
Barnaamij laga baahiyay BBC-da ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciyaaryahanka caanka ah ee Ingiriiska Alan Shearer kaas oo tijaabo maskaxeed ka maray jaamacadda Stirling, halkaas oo la ogaaday in waxyar kadib markii uu kubbadda madaxa ku teesteeyay uu isbadal weyn ku dhacay unugyadiisa maskaxda.
Arday aragga la' oo tartan kubbad guul ka soo hoyiyay
Ciyaaryahan raaligalin ka bixiyay sawir cawro ah oo uu gabadh ka faafiyay
Barcelona oo ka adkaatay juventus
Barnaamijka la baahiyay ayaa waxaa iska kaashaday xiriirka kubbadda cagta Ingiriiska ee FA iyo Ururka mihnadlayaasha kubbadda cagta ee PFA iyo seeynisyahano ku foogan arrimaha ciyaaraha.
Inta badan dadkii lagu waraystay barnaamijka oo kala ahaa dhaqaatiir, dad ciyaaraha ka fariistay, kuwa hadda ku jira iyo maamuleyaal ayaa waxa ay iska waafaqeen in kubbadda oo madaxa lagu dhufto ama la teesteeyo ay horseedi karto xanuun xagga maskaxda ah.
Dhaqaatiirka ku xeeldheer arrimaha maskaxda sida Dr Magdalena Ietswaart iyo Dr Angus Hunter ayaa sheegay in loo baahanyahay maalgalin xoog leh si loo sameeyo cilmi baaris dhamaystiran, kadibna go'aamo laga gaari karo in kubbadda madaxa lagu teesteeyo.
Image caption Shearer oo maskaxdiisa la baarayo
"Wixii hadda ka horeeyay maanan sharixi karin sida kubbad ordaysa oo madaxaada ku dhacday ay saameyn ugu yeelan karto badqabka maskaxdaada, balse hadda saansaan culus ayaa noosoo muuqatay in dhibaato ay ka iman karto" ayay tiri Dr Agnus.
Shearer markii uu la kulmay kooxda cilmi baarayaasha jaamacadda Stirling ayuu sheegay in loo baahanyahay in mashruucan la maaglagiyo.
Waxay noqonaysaa markii ugu horeysay oo cilmi baaris laga sameeyo arrintan, ama la ogaado suurtogalnimada in ay dhibaato jirto.
Kumanaan ciyaartooy ah oo mihnadoodu tahay kubbadda cagta ayaa maalin kasta teesteeya kubbadda, taas oo qeyb ka ah ciyaar wanaagga iyo xirfadaha lagu maamulo kubbadda.